Xog: Tirada ciidamada ay dowlada Ethiopia ka saartay Soomaaliya oo la ogaaday | Warkii.com
Home warkii Xog: Tirada ciidamada ay dowlada Ethiopia ka saartay Soomaaliya oo la ogaaday
Xog: Tirada ciidamada ay dowlada Ethiopia ka saartay Soomaaliya oo la ogaaday
Warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka ayaa werisay in dowladda Ethiopia ay kumanaan askari kala baxday Soomaaliya, sida ay sheegeen saddex ilo-wareed oo xog-ogaal ah.
Warkii.com ayaa aheyd warbaahintii ugu horreysay ee toddobaad ka hor shaacisay in qaar ka mid ah ciidamada Ethiopia ee aan ka tirsaneyn Amisom laga saaray Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, inkasta aynan helin tirada rasmiga ah.
Hase yeeshee Bloomberg ayaa werisay in Ethiopia ay Soomaaliya ka saartay 3,000 oo askari, kuwaasi oo dib loogu daad gureeyey dalkooda, si ay gacan uga gaystaan dagaalka lagu qaaday gobolka Tigray, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Si la mid ah Warkii.com, Bloomberg waxay werisay in ciidamada la saaray aysan qeyb ka ahayn 5,000 askari ee Ethiopia ugu jirta howlgalka nabad ilaalinta ee Amisom.
Afhayeenka wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa sheegay in su’aalaha la xiriira arrintan la weydiiyo dowladda Ethiopia, maadaama ciidamada la saaray aysan ahayn kuwa qeybta ka ah Amisom.
Dhinaca kale, Warkii.com ayaa ogaatay in Wasaaradda Gaashaandhigga Ethiopia ay billowday inay saraakiisha Tigray-ga ee qeybta ka ah ciidamada Amisom ka saarto Soomaaliya.
Previous articleWeerar loo adeegsaday Toorey oo ka dhacay Boosaaso & khasaare ka dhashay
Next articleMuqdisho iyo Mucaaradka: Maxaa la filaa todobaadkan
Guddoomiyaha Xisbiga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa weerar culus ku qaaday Xasan Cali Kheyre, xili uu dhawaan wajahayey culeyso kaga imaanaya siyaasiyiinta...
Dagaalka Tigrayga iyo Abiy Ahmed oo isku rogaya dabar-goyn iyo gumaad...
Doorashada Mareykanka – Donald Trump oo ay kasoo xirmeen albaabada guusha